Italiana ny vehivavy no tsara tarehy, izy ireo dia mivaivay, mirehitra, ary toy ny tsy misy vehivavy hafa amin’ny planeta Tany. Fantatro fa avy tamin’ny zavatra niainany, dia ampiasaina ho velona misy nandritra ny roa taona, ary izaho dia mampiaraka ny vehivavy tao Italia nandritra ny fotoana rehetra. Ary mamelà ahy hilaza zavatra roa taona izany. Toa mahatsiaro koa aho fa afaka manoratra ny boky iray na roa eo an-tanako andro any. Izany no mahavariana, mahaliana sy mahafinaritra. Fa amin’izao fotoana izao, ho an’ireo vao miainga, te-hiresaka momba italiana ny vehivavy tokan-tena sy ny fomba daty azy ireo. Izy ireo, mazava ho azy, mahagaga ny reny. Ary ny tena zava-dehibe, any Italia, vehivavy mankafy ny maha-reny. Firy reraka ray aman-dreniko aho dia hitako eo amin’ny playgrounds? Reraka tsy avy mahazatra isan’andro, fa koa avy amin’ny ankizy. Fa eto izany no samy hafa. Ny zaza iray dia tsy fialan-tsasatra, dia niankohoka tamin’ny havany rehetra.
Indrindra fa ao amin’ny avaratra.
Indrindra fa ao Milan
Izy ireo dia manana ny mason-tsivana ho an’ny lamaody fahaiza — isaky ny karazana fitafiana dia tsy maintsy ho ny iray marika sy ny loko sasany. Izy tsy tia loatra mamirapiratra feo aza. Na inona na inona italiana, ny fianakaviana ny zava-drehetra. Ny s nisy toy izany hatramin’ny fotoana hatry ny ela be, ary ankehitriny dia izany no ara-bola bebe kokoa mahasoa ny miaraka amin’ny fianakaviana. taona maro lasa izay, ny eo ho eo ny isan’ny ankizy ao amin’ny fianakaviana italiana iray dia. Ankehitriny ny s manakaiky ny fenitra Eoropeana. Nefa dia mbola be fitiavana sy liana ny akaiky ireo. Filazàna amin’ny olona eny imasom-bahoaka dia voarara. Ho an’ny vehivavy, izany dia mbola heverina ho ratsy feo. Ary ireo rehetra nitarika fifandirana dia nanazava tao an-trano. Any ambadiky ny varavarana. Ary ny ara-pihetseham-po toe-javatra izany ianao dia afaka mahita eo an — dalambe- tena fotsiny milalao (izy ireo dia teraka ny mpilalao sarimihetsika). Tsara, maha Amerikana ny tenako, misy ny fahasamihafana eo amin’ny vehivavy AMERIKANA sy ny vehivavy avy any Italia, ary eto no fotsiny ny sasany amin’izy ireo. Mahazo ny finday: an American tovovavy, izany dia mora kokoa ny mahazo ny maro raha toa izy mihevitra mivoaka miaraka aminao. Izany no tena mafy kokoa ianao rehefa miaraka amin’ny vehivavy ao Italia, ll maintsy miasa ho azy. Mivoaka: Misy ny vintana fa ny tovovavy malagasy dia manasa anao any ho any. Italiana ny ankizivavy tsy izany, dia tsy misy lalana. Tsy maintsy handray ny andraikitra. Manenjika: An American zazavavy tsotra be amin izany fomba izany, izy no t manana ny faharetana. Mbola italiana zazavavy te-hahita ny fomba lavitra ianao, dia handeha ho azy ireo. Rosia: Izany no mahazatra kokoa ho an’ny vehivavy Amerikana ny karama ho an’ny tenany. Mbola italiana ny ankizivavy tsy izany, farafaharatsiny nandritra ny fotoana (vitsivitsy voalohany daty). Fitia: izany dia mora kokoa mba manadala ankizilahy miaraka amin’ny vehivavy Amerikana. Ireo zazavavy dia tsara tarehy be toy ny mivantana araka izay azo atao isika, raha mampitaha azy ireo tovovavy italiana. Oh ry, tsy maintsy ho tena tsara izany, tena tsara amin’ny filalaovana fitia mba hahazo italiana zazavavy liana. Inona no italiana hatsaran-tarehy tahaka? Ny tarehiny dia tokony ho symmetric, boribory somary lavalava-namolavola, fanta-daza amin’ny cheekbones. Plump molotra, volontsôkôlà ny masony, ary ny sakany, tsara-groomed mainty volomaso. Bebe kokoa mahatoky ny fangatahana dia atao amin’ny orona, satria ny fitadiavana milamina orona any Italia no olana. Tsara tarehy ity boribory somary lavalava no namorona ny haizina matevina mahavariana ny soroka-lavany, very na tucked izy amin’ny andavanandro ny taovolony. Ny italiana rehetra no mankasitraka ny naturalness sy tsotra ny sary. Raha ny makiazy, raha italiana vehivavy nanapa-kevitra ny hampiasa makeup, dia ny zavatra voalohany dia atao dia ny mifantoka amin’ny ny maso. Amin’io lafiny io, ny Atsimo ny vehivavy no tena tsara vintana: ny phenotype tafiditra mainty matevina eyelashes. Matetika izy ireo mbola kely tinted amin’ny mascara. Ny tena endriky ny anarana ny ankizivavy dia mety ho voalaza ao ny teny iray: mahasarika. Hatramin’ny andro fahiny Roma, tsy misy zavatra niova — eo amin’ny saikinosy izy ireo tsy tahaka ny manify ny olona. Zatra ny silhouettes ny fahagola ireo tsangambato sy ny olo-malaza avy amin’ny Quattrocento canvases, ny maso dia mitaky zavatra voadio kokoa noho ny vatana nampijaliana amin’ny sakafo. Ny italiana rehetra no tena mankasitraka azy, toy izany koa ny teny tokony ho tsara: nanambara ny nono, andilany sy ny andilana, tsy misy fanampiny vala. Ny nono no tena nankasitraka tsarovy ny ady ny nono ny Sophia Loren sy Gina Lollobrigida. Angamba ny tena zava-dehibe dia mba ho azo itokiana.
Ho anao, ny iray ihany no
Ao Italia, ny vehivavy dia toy ny stylish ry zalahy izay manana ny heviny mikasika ny lamaody sy ny hahafantatra ny fomba hiatrehana ny tenany. Zava-dehibe iray hafa dia, tsy miresaka momba ny politika sy ny toy izany. Toy ny fitsipika, dia mankahala azy. Italiana vehivavy toy ry zalahy fa mahafantatra izay niresaka momba ary inona no mety mbola hanana ny heviny manokana momba ny zava-drehetra. Ho hatsaram-panahy manokana sy ny reniny, satria italiana olona sarobidy ny hevitra ao ambadiky ny teny reny tena be dia be. Ny maha-azo itokiana, matoky, fomba, very ny sainy rehetra ireo dia ny zavatra manan-danja indrindra fa italiana ny vehivavy tahaka ny any ny olona, na vahiny na tsia. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny efa mahazatra ny orinasa ny namana, na, angamba, dia ny havany. Mba ho tena ao amin’ny orinasa ny azy, ary mba haneho ny fitiavana sy ny fanajana ny namana mahazatra dia tena zava-dehibe. Aza matahotra ny manatona ny iray amin’ny bar, na dia eny an-dalana eny, izy ireo dia tena malala-tsaina ho toy ny olom-pantatra, ary, toy ny fitsipika, tsy misy olana ny miresaka amin’ny iray manintona sy mahaliana rangahy. Ary raha mba mihaona amin’ny tena fiainana dia tsy safidy, dia fantatro fa misy olona vitsivitsy niaraka tranonkala manokana natao ho an’ny fiarahana italiana vehivavy. Ny fomba tsara indrindra mba hanomboka mampiaraka ny iray amin’ireo italiana tokan-tena dia mba hihaona ny namana. Izany no tsara indrindra mba hahafantatra ny anarana ankizivavy tiany mandritra ny fivoriana miaraka amin’ny namana tsara. Hihaona ny namana akaiky indrindra ny zazavavy, tsikelikely hahazo ny fahatokiana. Izany no dingana voalohany amin’ny fo ny malalany. Raha nahazo ny fanohanana ny namany, dia miezaka ny fametrahana azy eo amin’ny daty. Raha tsara vintana ianao, dia tsy ho voafetra ny fivoriana iray. Hitondra azy amin’ny zava-pisotro fa ho azo antoka ny handoavana ny zava-pisotro anao. Fa raha izao ianao no miaina tsy fotoana tsara indrindra eo amin’ny lafiny fitantanam-bola, tsy hanao izany. Raha ny fifandraisana amin’ny tsara tarehy italiana ny vehivavy dia hampivelatra haingana, ho vonona ho nandreraka olom-pantatra amin’ny ray aman-dreniny. Tena teny italiana ry zalahy dia tsy dia nafana fo rehefa miresaka momba ny sakafo hariva amin’ny ray aman-dreniny. Mino aho fa amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra ny fianakaviana sakafo hariva dia tsy ho toy ny mampidi-doza toy ny Italiana milaza. Azo inoana, ny roa molotov dia miandry anareo ao amin’ny fisotroana miaraka amin’ny hoavy father-in-lalàna. Tsy mbola, eo ambanin’ny toe-javatra rehetra tokony tsy fanajana ny fianakaviany. Amin’ity tranga ity, dia tokony tsy ho lehibe loatra, raha tsy izany ianao dia afaka ho lasa mankaleo.
Mampiasa ny vazivazy
Raha hihaona Italiana ao Italia, diniho ny fahasamihafana eo amin’ny faritra. Saika ny faritra rehetra Italia manana ny lalàna sy ny finoantsika. Toy ny mpitari-dalana ankapobeny, Northerners mirona ho malina kokoa noho ny hatrany atsimon’i mpiara-miasa. Ny tiany ireo olona ireo ihany koa ny hafa — ny teo aloha kokoa hazan-dranomasina sy ny jiro lovia, raha Tatsimo kokoa hena sy ny spaghetti sauces. Raha betsaka kokoa ny olona tany Italia noho ny vehivavy, dia mbola maromaro Italiana ny vehivavy tokan-tena fotsiny miandry anao. Ao Italia, misy fivavahana ao amin’ny fianakaviana. Izany dia tsy maintsy ho Italianina mba hanangona amin’ny fety miaraka amin’ny fianakaviana manontolo na ny hihaona amin’ny namana. Fanambadiana aloha dia ara-dalàna, ary ho an’ny rehetra ny toetra sy ny hafanam-po italiana olona, ny fianakaviana dia foana ny nataony tao ny lohalaharana. Ny mpivady izay nitarika fifandirana isan andro, miaraka amin’ny takelaka natsipy, fa tsy afaka ny hiaina tsy misy samy hafa dia tsy zava-tsy mahazatra: fa velona izy ireo ary avy eo dia nisara-bady ary avy eo dia mahazo manambady indray (ohatra ny mahazatra dia ny sarimihetsika ny Fanambadiana ny Fomba italiana amin’ny Sophia Loren sy Marcello Mastroianni). Ny vehivavy tokan-tena iray tany Italia no tsy enjehina, handratra na baraka. Voalohany, ny havana, maro ny rahalahy sy anabavy dia foana ny hanohanana azy, ary faharoa, ny olona dia tsy nametraka azy teo amin’ny hazo fijaliana, na dia izy no zaza. Ary tsarovy, ny fifandraisana rehetra dia roa-dalana eny an-dalana, ka miezaka ny tsy hanapaka tsy vitan’ny teny ihany fa tsy am-bava ny fifandraisana — dikany, ny fihetsika, ny fihetseham-po. Hamaly haingana hita famantarana
← Ny fahalalam-pomba hivory hiaraka vahoaka rosiana - Hianatra Teny rosiana
Toerana Ho An'ny Mahafantatra Iray Ry Zalahy →